Mogadishu Journal » Belguim Oo Hawada Ku Dubatay Brazil Kana Reebtay Koobka Adduunka Iyaguna Balansay France Semi-Finalka Tartanka
Xulka Belguim ayaa koobka adduunka ka reebay xulka Brazil guulna ka gaartay saaxiibada Neymar kadib kulan xiiso leh oo ay labada xul soo bandhigeen kulankii ka dhacay Kazan Arena.
Belguim ayaa wakhti horeba si dar-dar leh ku soo galay kulanka iyaga oo doonayay in ay goolal wakhti hore ah ka dhaliyaan iyaga oo qaadayay weeraro joogto ah.
Brazil ayaa dhankooda raadinayay goolal iyaga oo dhankooda qaadayay weeraro ay ku doonayeen goolka ciyaarta iyo in ay dhankooda u jeediyaan ciyaarta.
Saaxiibada Hazard ayaa iyagu qaadayay weeraro rogaal celis ah iyaga oo adeegsanayay Romelu Lukaku oo wax kale ahaa oo soo bandhigay qaab ciyaareed waali ah.
Belguim ayaa daqiiqadii 13-aad heshay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay Fernandinho oo si khaldan uga dhaliyay goolkiisa hogaankana u dhiibay xulka Belguim.
Brazil ayaa u baxday sidii ay u dhalin lahayd goolka bar-baraha iyaga oo maamulayay ciyaarta halka Belguim ay dib daafaca ugu laabatay iyaga oo isticmaalayay weerarka rogaal celiska ah.
Daqiiqadii 31 ayay Belguim dhalisay goolka 2-aad ee ciyaarta iyaga oo uu gool u dhaliyay xiddiga Kevin De Bruyne kaas oo ka faa,iidaystay weerar rogaal celis ah oo uu soo qaday Romalu Lukaku isaga oo ciyaarta ka dhigay 2/0.
Waxa sidaas ku dhamaatay Qaybtii hore ee ciyaarta oo uu xulka Belguim ciyaarta hogaaminayo waliba dhalin karay goolal intaas ka badan hadii uu nasiibku caawin lahaa.
Qaybtii dambe ayuu xulka Brazil si dar-dar leh ku bilowday ciyaarta iyaga oo raadinayay sidii ay ugu soo laaban lahaayeen ciyaarta waliba qaadayay weeraro aan kala joogsi lahayn.
Belgum ayaa dhankooda ku bilday daafaca iyaga oo qaadayay weeraro rogaal celis ah oo ay dhawr jeer ugu dhawaadeen in ay dhaliyaan goolka 3-aad ee ciyaarta.
Kadib weeraro badan isku dayo badan iyo maamul badan oo ay ciyaarta ku haysay xulka Brazil ayaa daqiiqadii 76-aad dhaliyay goolka 1-aad ee xulka qarankiisa isaga oo ka dhigay 2/1 ay Brazil dhalisay goolka 1-aad.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo uu xulka Belguim sidaas ku gaaray guul qiimo leh oo ay isaga xaadiriyeen wareega Semi-finalka koobka adduunka Russia 2018.
Imaaraadka oo looga digay Faro gelinta uu ku hayo Siyaasada Soomaaliya